Multi-purpose Inonzi-firimu Solar Rechargeable Flashlight China Manufacturer
Tsanangudzo:Flexible Solar Charger,Multi-purpose Battery Pack,Solar Charger Accessories
Home > Products > Solar Power Bank > Flexible Solar Charger > Multi-purpose Inonzi-firimu Solar Rechargeable Flashlight
Simba rezuva rinoshandiswa uye rinogona kushandiswa simba. Inopfuma mune zvigadzirwa, kusununguka kushandiswa, pasina kutakura, pasina kusvibiswa kune zvakasikwa. Yakagadziridza hupenyu hutsva hwevanhu, uye yakaunza hurumende nevanhu kuvanhu munguva yekuponesa simba uye kuderedza kusvibiswa.
Ichi chigadzirwa iye zvino chinonyanya kufanana chinokonzerwa nehutachiona hwemhepo yakakura ye-solar Charger , inonzi Flexible Solar Charger .iyo mabasa makuru ndeyi: simba rezuva rinotengesa kusachengetedza, simba remasimba, SOS signal uye flashlight mabasa. Inoshandisa yakakwirira-kuita lithium bateri sebheteri rekuchengetedza iyo foni paunenge uchigamuchira zuva, uye ine Multi- purpose Battery Pack inogona kushandisa girazi yakasimba panguva imwechete. Chigadzirwa chacho pachacho chinogona kupomerwa zvakananga neapakitaji emagetsi okubhaja, kana kuti inogona kutengesa kuburikidza nekapu yekupisa kwezuva, iyo inonyanya kushandiswa. Icho chisarudzo chakanaka kune shamwari dzako dzinoda mitambo yekunze yekugadzirisa chinetso icho chimbo chacho hachina magetsi chero nguva uye nzvimbo.
Inoshandisa i-high-performance lithium-ion bhetori sechigadziro senzvimbo yekuchengetedza simba, iyo inogona kutengesa foni paunowana chiedza chezuva, uye inogona kushandisa flashlight panguva imwe chete, iine Soja Charger Accessories
Kushandisa: zvishoma nezvishoma tambanudza kunze kwemazuva ezuva uye uzviise muzuva rezuva kuti uchengetedze gadziriro yekuchengetedza simba kwechigadzirwa kana kushandisa kashandisi yemashandisi kuti utengese chigadzirwa ne ac. Kana isiri kushandiswa, shanduka uye gadzirisa mashizha ezuva kusvikira apfigwa zvakakwana. Ikofoni inogona kukwaniswa nemutsetse wayo unobhadhara.